Banyere Anyị - Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd.
Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd e hiwere na 2010, Bontai nwere ụlọ ọrụ nke ya nke na-ahụ maka ire, na-emepe emepe na imepụta ụdị ngwaọrụ diamond. Anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ na-egweri diamond na polishing maka sistemu poliish n'ala, gụnyere akpụkpọ ụkwụ egweri diamond, wiil iko diamond, diski igwe diamond na ngwaọrụ PCD. Ka ọdabara na-egweri nke iche iche nke ihe, terrazzo, nkume ala na ndị ọzọ na-ewu ala.
Dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ a, ọ bụ oru ngo na ụlọ ọrụ taya Nanjing, nke nwere mkpokọta 130,000m². BonTai ọ bụghị naanị na-enye ngwá ọrụ dị elu, kamakwa ọ nwere ike ịme ihe ọhụrụ na teknụzụ iji dozie nsogbu ọ bụla mgbe ị na-egweri na polishing n'elu ala dị iche iche.
Ike mmepe siri ike
Site na ihe ọmụma ngwaahịa ọkachamara na usoro ọrụ dị mma na otu BonTai, anyị nwere ike ọ bụghị naanị dozie ngwaahịa kachasị mma na nke kachasị mma maka gị, kamakwa dozie nsogbu ọrụaka maka gị. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
A maara ụlọ ọrụ anyị maka ịdị mma ya dị elu ma mara ya site na ịdịte aka dị oke mma, nkwụsi ike na nnukwu kenkowaputa na "BTD" ika diamond na-egweri ihe na-egbuke egbuke, nke a na-anabata nke ọma n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. Ebupụ ya na East na West Europe, America, Australia, Asia na Middle East na ahịa zuru ụwa ọnụ.
Anyị na-agbaso usoro nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "ezigbo ngwaahịa, ihe na-egweri dị mma, na ịdị mma ọrụ". N'ịdabere na nhazi ngwaahịa nke ọma, ịdị mma ngwaahịa kwụsiri ike, njikwa usoro dị mma yana ezigbo ọrụ ndị ahịa, ndị obodo ndị ahịa achọpụtala ma tụkwasara ya obi.
Anyị na-aga n'ihu na-egbo mkpa onye ọ bụla nke ndị ahịa anyị, ngwaahịa ndị a na-eme ka ha dị iche iche, na-eme ka uru nke ngwaahịa anyị dịkwuo mma, ma na-emepụtakwu uru maka ndị ahịa anyị. Gbaa mbọ maka ndị na-ebusa ngwa diamond kacha mma n'ụwa.